Fepetran'ny marketing izay zava-dehibe | Martech Zone
Fepetran'ny marketing izay zava-dehibe
Talata, Janoary 21, 2014 Douglas Karr
Pardot natambatra ity takelaka fametahana metatra marketing efa nanao ny fihodinana.
Marketing ankehitriny Analytics mahery. Ny mpivarotra dia manana alalana amin'ny karazana metrika rehetra, manomboka amin'ny fahitan'ny pejy sy isan'ny mpankafy hatramin'ny statistika misimisy kokoa momba ny fitarihana sy ny varotra. Miaraka amin'ny mangarahara eo amin'ny angon-drakitra momba ny varotra, mora ny manarona ireo angon-drakitra izay - matetika kokoa noho ny tsy - tsy misy fiantraikany amin'ny vola miditra aminao. Ireo mpivarotra dia mila mifantoka amin'ireo metrika izay famantarana tsara kokoa ny amin'ny fahombiazan'ny varotra sy ny varotra. tamin'ny alalan'ny Pardot
Manana ahiahy kely momba ny sasany amin'ireo metrika aho. Ohatra, tsy hitako ny fifanakalozan-kevitra momba ny sandan'ny mpanjifa na ny fitazonana ny mpanjifa. Rehefa mijery hampitombo ny varotra mailaka ataontsika isika - ohatra, dia mila mahatakatra ny fijanonana sy ny tahan'ny fihazonana ny lisitry ny mpanjifa. Hitanay eo anelanelan'ny 3% sy 5% ny lisitray miova isan-kerinandro rehefa mandao asa ny olona na manova adiresy mailaka fotsiny. Midika izany fa raha te hanohy hitombo ny tobin'ny mpanjifantsika dia tokony hampiroborobo sy handresy izany tsy fahampiana izany isika. Ilaintsika koa ny mijery ny fiovana mahavariana amin'ny tahan'ny fihazonana… raha vitsy ny mpamandrika no miala, mety mila mieritreritra ny paikadin'ny atiny mailaka isika.
Mampatahotra ihany koa ny tsy fisian'ny metrika fifaninanana. Matetika izahay mahita ny mpanjifa miforitra rehefa milatsaka ny statistikan'izy ireo - saingy indraindray ny fiantraikan'ny fizaran-taona dia misy fiantraikany amin'ny tsirairay ary ny mpanjifanay dia mbola mampitombo ny anjarany eo amin'ny tsena. Mbola misy marimaritra vitsivitsy hafa manandanja (sy fantsom-barotra izay manandanja)… saingy heveriko fa fanombohana tsara io.
Tags: toeran'ny dokabounce ratekitiho hitarikatahan'ny click-throughfifanarahana mihidyvidin'ny isam-bolaVidin'ny kliobavidiny isaky ny mitarikaFNTtahan'ny fanateranampanara-dianamanafahatsapanakalitaon'ny firakaLeadsmitarika namboarinametatra marketingtahan'ny misokatrapardotLahatsoratrafividianana fitondran-tenaanaranaretweetsmizarafizarana statistika
Ahoana ny fomba hahitana fantsom-barotra vaovao
Jiwire: Fandefasana finday matanjaka amin'ny toerana misy azy